ဘာကြောင့် အာရှအမျိုးသားတွေဟာ အသားဖြူစေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပိုမို အသုံးပြုကြတာလည်း ? | Buzzy
ဘာကြောင့် အာရှအမျိုးသားတွေဟာ အသားဖြူစေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပိုမို အသုံးပြုကြတာလည်း ?
အာရှတလွှားက အသားအရောင်စုံသော အမျိုးသမီးတွေဟာ အသားဖြူစေတဲ့ အလှကုန်တွေကို အသုံးပြုကြတာ မဆန်းလှပေမယ့် အမျိုးသားအများစုဟာလည်း အသားဖြူစေတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အာရှတလှားက အသားအရောငျစုံသော အမြိုးသမီးတှဟော အသားဖွူစတေဲ့ အလှကုနျတှကေို အသုံးပွုကွတာ မဆနျးလှပမေယျ့ အမြိုးသားအမြားစုဟာလညျး အသားဖွူစတေဲ့ အလှကုနျပစ်စညျးတှကေို အသုံးပွုကွတယျလို့ သိရပါတယျ။
ရှေးယခင်တုန်းကတော့ အသားဖြူသူတွေထက် အလယ်အလတ် အသားအရည်ကသာ ယောင်္ကျားပီသတယ်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြရာကနေ ၊ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ အသားဖြူတာဟာ ပိုမိုပြီး လူကြိုက်များလာတာပါ။ အခြားဖော်ပြချက်တစ်ခုမှာတော့ အသားဖြူတာဟာ လူ့အဆင့်အတန်းနဲ့လည်း သွားသက်ဆိုင်သလို ခံယူလာကြတာပါ။
ရှေးယခငျတုနျးကတော့ အသားဖွူသူတှထေကျ အလယျအလတျ အသားအရညျကသာ ယောကငြ်ျားပီသတယျလို့ သတျမှတျခဲ့ကွရာကနေ ၊ ယနခေ့တျေမှာတော့ အသားဖွူတာဟာ ပိုမိုပွီး လူကွိုကျမြားလာတာပါ။ အခွားဖျောပွခကျြတဈခုမှာတော့ အသားဖွူတာဟာ လူ့အဆငျ့အတနျးနဲ့လညျး သှားသကျဆိုငျသလို ခံယူလာကွတာပါ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းက ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာတော့ အသားဖြူခြင်း မဖြူခြင်းဟာ လူတစ်ဦးချင်းရဲ. အနေအထားကို ဖော်ပြနိုင်တယ်လို့ လူအချို.က အလွယ်တကူ ယူဆကြပါသတဲ့ ၊ ကြည်လင်တဲ့ အသားအရည်ပိုင်ရှင်တွေကို လူတွေက အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားတစ်ရပ်လို့ အလွယ်တကူ ယူဆပြီး အသားအရည် မည်းတဲ့လူတွေကိုတော့ သာမန်အလုပ်သမားတစ်ဦးလို့ အလွယ်တကူ ယူဆကြကြောင်း သိရပါတယ်။ဒီလို အလွယ်တကူ ကောက်ချက်ဆွဲတဲ့ အယူအဆဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကနေ အခြားတစ်နိုင်ငံ ၊ မျိုးဆက်တစ်ခုကနေ အခြားမျိုးဆက်တစ်ခု ပြန့်နှံခဲ့ပြီး ယနေ့ခေတ်မှာတော့ ရေပန်းစားနေပါပြီ။
၂၀၁၂ ခုနှဈတုနျးက ထုတျဝခေဲ့တဲ့ စာအုပျတဈအုပျမှာတော့ အသားဖွူခွငျး မဖွူခွငျးဟာ လူတဈဦးခငျြးရဲ. အနအေထားကို ဖျောပွနိုငျတယျလို့ လူအခြို.က အလှယျတကူ ယူဆကွပါသတဲ့ ၊ ကွညျလငျတဲ့ အသားအရညျပိုငျရှငျတှကေို လူတှကေ အခှငျ့ထူးခံ လူတနျးစားတဈရပျလို့ အလှယျတကူ ယူဆပွီး အသားအရညျ မညျးတဲ့လူတှကေိုတော့ သာမနျအလုပျသမားတဈဦးလို့ အလှယျတကူ ယူဆကွကွောငျး သိရပါတယျ။ဒီလို အလှယျတကူ ကောကျခကျြဆှဲတဲ့ အယူအဆဟာ နိုငျငံတဈနိုငျငံကနေ အခွားတဈနိုငျငံ ၊ မြိုးဆကျတဈခုကနေ အခွားမြိုးဆကျတဈခု ပွနျ့နှံခဲ့ပွီး ယနခေ့တျေမှာတော့ ရပေနျးစားနပေါပွီ။
၂၀၁၅ ခုနှဈက လလေ့ာခကျြအရ လူတနျးစား အလှာအသီးသီးက အမြိုးသား တက်ကသိုလျကြောငျးသားတှကွေားမှာ အသားဖွူစတေဲ့ အလှကုနျတှကေို အသုံးပွုမှုဟာ ရပေနျးစားပါတယျတဲ့ ။ ထိုငျးနိုငျငံမှာဆိုရငျ ကြောငျးသား ၆၉.၅ ရာခိုငျနှုနျးက အသားဖွူစတေဲ့ အလှကုနျတှကေို အသုံးပွုပွီး ၊ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံက အမြိုးသားကြောငျးသား ၂၅.၄ ရာခိုငျနှုနျးဟာလညျး အသုံးပွုပါသတဲ့။
၂၀၁၅ ခုနှစကြ လလေ့ာခကွအြရ လူတနြးစား အလှာအသီးသီးက အမွိုးသား တကျကသိုလကြွောငြးသားတှကှေားမှာ အသားဖှူစတေဲ့ အလှကုနတြှကေို အသုံးပှုမှုဟာ ရပနြေးစားပါတယတြဲ့ ။ ထိုငြးနိုငငြံမှာဆိုရငြ ကွောငြးသား ၆၉.၅ ရာခိုငနြှုနြးက အသားဖှူစတေဲ့ အလှကုနတြှကေို အသုံးပှုပှီး ၊ ဖိလစပြိုငနြိုငငြံက အမွိုးသားကွောငြးသား ၂၅.၄ ရာခိုငနြှုနြးဟာလညြး အသုံးပှုပါသတဲ့။
ဘယ်လိုပဲ အသားဖြူတဲ့လူတွေ ရေပန်းစားလာတယ်ဆိုဆို အသားလတ်သူတွေဟာလည်း ရေပန်းစားနေဆဲပါပဲ ။ သင်က အသားလတ်တယ်ဆိုရင်တော့ လူအများကြား သတိထားမိစရာ ဖြစ်ပြီး ၊ အကျိုးထူး အမှန်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဘယျလိုပဲ အသားဖွူတဲ့လူတှေ ရပေနျးစားလာတယျဆိုဆို အသားလတျသူတှဟောလညျး ရပေနျးစားနဆေဲပါပဲ ။ သငျက အသားလတျတယျဆိုရငျတော့ လူအမြားကွား သတိထားမိစရာ ဖွဈပွီး ၊ အကြိုးထူး အမှနျပဲ ရှိပါသေးတယျ။